Kooxaha Arsenal & West Brom Oo Dhibcaha Qayb Saday, Arsene Wenger Oo Rekoodh Cusub Dhigay Iyo Gunners Oo Dhibco Kale Iska Lumisay. – GOOL24.NET
Kooxaha Arsenal & West Brom Oo Dhibcaha Qayb Saday, Arsene Wenger Oo Rekoodh Cusub Dhigay Iyo Gunners Oo Dhibco Kale Iska Lumisay.
Arsenal ayaa barbaro 1-1 ah la soo gashay kooxda West Brom waxayna Gunners iska lumisay fursada ay sare ugu soo kori lahayd miiska kala saraynta Premier league. Arsenal ayaa goolka furitaanka kulankan ee ay guusha ku gaadhi lahayd la timid daqiiqadii 83 aad laakiin West Brom ayaa u dagaalantay barbaraha iyada oo daqiiqadii 89 aad la timid goolka Arsenal guusha ka hor joogsaday.
Arsenal ayaa soo gashay kaalinta shanaad laakiin waa ka hor inta ayna Tottenham kulankeeda ciyaarin iyada oo Gunners 21 kulan ka heshay 38 dhibcood. Arsene Wenger ayaa kulankan rekoodh cusub ka dhigay wuxuuna noqday tababarihii abid ugu kulan maamulka badnaa horyaalka Premier League isaga oo Gunners maamulay kulankiisii 811 aad wuxuuna dhaafay Sir Alex Ferguson.
KAYDKA: Nyom, Yacob, Myhill, McClean, Burke, Krychowiak, McAuley.
KAYDKA:Mertesacker, Ospina, Walcott, Welbeck, Maitland-Niles, Coquelin, Elneny.
Arsenal ayaa kulankan ciyaaraysay iyada oo doonaysay in ay sii wadato guulihii ay soo waday kulamadii ugu danbeeyay isla markaana ay sii bildhaansato kooxaha ka horeeya ee ay kaalmaha afarta sare kula taramayso, laakiin kooxda West Brom oo niyada ku dhisanaysay guushii 3-1 ka ahayd ee ay Gunners xili ciyaareedkii isla garoonkeeda kaga gaadhay ayaa iska caabin wayn kala hortimid.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ahayd mid aad u xidh-xidhnayd oo aan lahayn fursado badan oo cadaan ah inkasta oo ay Arsenal ahayd kooxda fursadaha ugu badan abuurtay balse si wayn ugu mashquul sanayd halkii ay ka dhaafi lahayd difaaca West Brom.
Arsenal ayaa si buuxda ciyaarta gacanta ugu haysay laakiin qorshaha West Brom ayaa ahaa in ay si buuxda difaaca ugu jirto markasta oo ayna kubbada haysan balse waxay weeraro deg deg ah iyo kubbada tuuryo dheer ah ku raadinaysay fursado ay goolal kula timaado.
DAQIIQADII 37 AAD qaaybtii hore ee ciyaata ayay Arsenal dhhibaato dhaawac la kulantay kadib markii uu Garth Barry sabab u noqday in waqtigii ciyaarta ee Kolasinac uu soo dhamaaday waxaana kaydka looga yeedhay da’yarka Ainsley Maitland-Niles.
Tababaraha kooxda West Brom ee Alan Pardew ayaa ku faraxsanaa dhaqanka shaqo ee ay kooxdiisu qaybtii hore ka qabtay si ay xaalada ugu adkayso Arsenal waxayna qaybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay markale ciyaartu ku bilaabtay qaab aan fursado fiican lahayn balse Arsenal ayaa doonaysay in ay dadaalkeeda laba jibaarto si ay goolka furitaanka ula timaado.
DAQIIQADII 60 AAD Lacazette ayaa ugu dhawaaday in uu Arsenal u dhaliyo goolka furitaanka laakiin goolhayaha West Brom ee Foster ayaa badbaadin fiican sameeyay si uu koxdii kooxdiisa West Brom ciyaarta ugu sii hayo.
DAQIIQADII 62 AAD Markale Lacazette ayaa helay fursad cajiib ah kadib markii uu kubbad fiican ka helay Alexis Sanchez balse kubbada uu xidiga ree France goolkan ku dhalin lahaa ayaa birta wax yar u martay.
DAQIIQADII 72 AAD Wenger ayaa kaydka uga yeedhay kabtankiisa Per Mertesacker, wuxuuna saaray Koscielny isaga oo u muuqday in kubbadaha sare ay kooxdiisa halista ku ahaa uu Mertesacker ku fiicanaan karo. Waxaana sidoo kale kaydka looga yeedhay Welbeck iyada oo Iwobi uu baxay.
DAQIIQADII 83 AAD Alexis Sanchez ayaa markale kooxdiisa ka saaray xaalada adag ee ay ku jirtay kadib markii qalad loogu galay cidhifka xerada ganaaxa West Brom isla markaana uu darbo joog hoose ah oo uu ka tuuray goobta qaladka loo dhigay uu goolkan ku dhaliyay iyada oo kubbadu ku sii dhacday difaaca West Brom, waxayna sidaa ku gashay goolka West Brom ee sida adag loo soo ilaalinayay iyada oo ciyaartu noqotay 1-0 ay Arsenal ugu danbayn hogaanka ciyaarta ku qabtay.
Laakiin qiimayn lagu sameeyay goolka Sanchez markii hore loo qoray ayaa laga dhigay mid iska dhalis ah kaas oo uu kubbada goolkiisa ku sii leexiyay McClean maadaama oo ay jahada kubbada Sanchez goolka dhaafsanayd.
Iyada oo todoba daqiiqo hadhsan yihiin ayuu lambarka todobaad ee Gunners jabiyay ismari waagii ciyaarta ee waqtiga dheer soo taagnaa.
DAQIIQADII 87 AAD Chambers ayaa musiibo ku noqday kooxdiisa kadib markii lagu ciqaabay in uu kubbada gacanta ku celiyay waxayan West Brom heshay fursad dahabi ah oo ay markiiba ciyaarta ugu soo laaban kartay isla markaana wadno xanuun ku noqday Gunners.
DAQIIQADII 89 AAD Jay Rodriguez ayaa shabaqa Petr Cech dhex dhigay darbo uu ka tuuray qaladka rekoodhe ee kooxdiisa lagu abaal mariyay si uu ciyaarta ugu soo celiyo babraro 1-1 ah isla markaana uu Petr Cech ugu diido in uu kulankiisii 200 aad uu shabaq nadiif ah garoonka kala baxo.
Dhamaadkii ciyaarta ayay Arsenal si xoogan u doonaysay in ay la timaado goolka barbaraha laakiin ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbaro 1-1 ah iyada oo Arsenal daqiiqado koobab iskaga lumisay hogaankii ciyaarta ee ay heshay.
Arsenal ayaa kaalinta shanaad si ku meel gaadh ah u sii gashay ka hor kulanka Tottenham iyada oo 21 kulan ka heshay 38 dhibcood waxayna hoos uga sii dhacday kooxaha kaalmaha hore ku jira ee ay hiigsanaysay.
Gen Maxamed Koofiyad says:
horto tageranimadu maaha shay aad u fudud mana aha dhar la xidhanayo lana iska bedelayo
ani waxan funns ka gunnera markasta guul iyo guul darroba waan lagarab taaganahay
balse soo noqoqshada awoodi naadiga waxay ku xidhanthy tagista wenger
hadi uu tago wax way isbadali insha allah
wenger wuxuu doonaya inuu isticmaalo dad 30 koor u dhafay
nina 20 jjrrk ayuu isticmaalayaaaa